Pi-KVM: Mashruuca Wareejinta KVM ee Raspberry Pi | Laga soo bilaabo Linux
Xulka wararka oo dhan | | Noticias, Shabakado / Adeeg
Pi-KVM waa qeyb ka mid ah barnaamijyada iyo tilmaamaha si loogu badalo a saxanka Raspberry Pi oo si buuxda u shaqeynaya IP-KVM beddelaad. Guddigu wuxuu ku xiraa server-ka HDMI / VGA iyo USB-ga kumbuyuutarrada loogu talagalay kontoroolka fog, iyadoon loo eegin nidaamka hawlgalka.
Tani waxay shidi kartaa adeegaha, dami kartaa ama dib u bilaabi kartaa, u qaabee BIOS-ka oo xitaa gabi ahaanba dib u soo cusbooneysii nidaamka qalliinka sawirka la saaray, oo lagu daray Pi-KVM waxay ku dayan kartaa kumbuyuutar CD-ROM iyo flash drive ah.
1 Ku saabsan Pi-KVM
1.1 Macluumaad dheeri ah
Ku saabsan Pi-KVM
El nidaamka hawlgalka Pi-KVM wuxuu ku saleysan yahay ARM Arch Linux waana loo habeyn karaa baahi kasta.
Halka nidaamka faylasha waa la aqrin karaa oo keliya asal ahaan Nidaamka qalliinka wuxuu ku socdaa qaab aqrin-keliya, sida nidaam gundhig leh ay tahay. Tani waxay ka hortageysaa waxyeelada kaararka xusuusta sababtoo ah koronto la'aan lama filaan ah.
Ka sokow tan waxay bixisaa marin u helka adeegaha iyada oo loo marayo marinka websaydhka laga helo biraawsar caadi ah ama macmiil VNC ah (oo aan lahayn tufaaxyada Java ama fiilooyinka fiilooyinka) oo ka hooseeya daahitaanka fiidiyowga oo hooseeya (oo ah amarka 100 milliseconds) iyo FPS sare. Waayo, wuxuu adeegsadaa ΜStreamer (kuna qoran C iyo adeegsiga MJPG-HTTP).
Dhinaca kale, kumbuyuutarka buuxa iyo jilitaanka jiirka (oo ay ku jiraan LED iyo rogista / taabashada duubista taabashada), CD-ROM iyo jilitaanka Flash, u oggolow maaraynta wax kasta oo lagu daray sawirro badan ayaa la buuxin karaa oo lagu xidhi karaa sida loogu baahan yahay.
Maareynta awoodda adeegaha waxaa lagu sameeyaa iyadoo la adeegsanayo biinanka ATX ee ku yaal Motherboard-ka ama Wake-on-LAN.
Waxa kale oo ay leedahay habab oggolaansho la ballaarin karo: laga bilaabo lambarka sirta ah ee caadiga ah illaa awoodda loo adeegsan karo hal adeegsi oggolaansho iyo PAM.
Astaamaha ugu waaweyn ee taagan:
Jaban, laakiin ka fiican xalka ganacsiga.
Si fudud loo dhiso: iyadoo la adeegsanayo nidaam hawlgal u diyaar ah oo la dhisi karo oo kaliya adoo ordaya samee builde ku rakibida kaarka SD samee rakib. Qalabka waxaa lagu sameyn karaa nus saac iyo alxamid la'aan.
Taageerada qalabka ugu ballaadhan
Daahitaan aad u hooseeya
Iftiiminta webka oo saa'id ah
Keyboard iyo jiirka
Qaybta kaydinta cufnaanta
Maamulka awooda ATX
IPMI BMC oo u hoggaansamaysa is-dhexgalka kaabayaasha shabakadeed ee jira.
Taageerada qalabka ballaaran: Raspberry Pi 2, 3, 4 ama ZeroW, iyo sidoo kale aalado fiidiyoow oo kala duwan.
En pocas palabras, waxaan ku soo koobi karnaa Pi-KVM qalab fudud iyo saaxiibtinimo taas wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku dhisto oo aad ku rakibto nidaam qalliin qoriga xusuusta Raspbery Pi oo leh dhawr amar.
Abuuraha wuxuu ku sifeeyaa inuu yahay:
Pi-KVM waa IP-KVM aad u fudud oo si buuxda u shaqeeya Raspberry Pi oo aad ku sameyn karto gacmahaaga. Qalabkani wuxuu gacan ka geysanayaa maaraynta serverka ama xarumaha shaqada meel fog, iyadoon loo eegin xaaladda nidaamka qalliinka ama haddii mid la rakibay. Waad xallin kartaa wax dhibaato ah, u qaabeysaa BIOS, ama xitaa dib u dejin kartaa nidaamka qalliinka adoo adeegsanaya ku-darsashada CD-ROM-ka ama ku-dayashada flash-ka.
Kuwa xiiseynaya mashruucan, waa inaad ogaataa taas tirada qaybaha loo baahan yahay, marka lagu daro Raspberry Pi, waa mid aad u yar, taas oo ka dhigaysa mid suurtagal ah in lagu soo ururiyo nus saac oo keliya wadarta guudna waxay noqon doontaa $ 30 ilaa $ 100 (tani waxay kuxirantahay xitaa qaabeynta ugu qaalisan) halka mulkiilayaal badan oo IP-KVM ah oo shaqadooda yartahay ku kacayaan $ 500 iyo wixii kabadan.
Xirmooyinka gaarka ah ee Pi-KVM iyo davon kvmd waxaa lagu qoray Python oo shati ka haysta GPLv3.
Taas ka sokow waa muhiim in la xuso taas Guddi ballaarin gaar ah oo loo yaqaan 'Raspberry Pi 4' ayaa sidoo kale la diyaarinayaa, kaas oo fuliya dhammaan shaqooyinka lagu sharraxay, oo lagu daray astaamo kale oo badan (waad ku ogaan kartaa faahfaahinta ku saabsan gudaha GitHub).
Amarada horudhaca ah ayaa lafilayaa inay furmaan dabayaaqada sanadkan 2020 Iskusoo wada duuboo, kharashka ayaa la filayaa inuu ku dhowaad $ 100 ama ka yar yahay.
Kuwa xiiseynaya, waxay ku biiri karaan wararka halkan ka sii dalbo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Shabakado / Adeeg » Pi-KVM: Mashruuca Wareejinta KVM ee Raspberry Pi